Uqoqosho Umatshini wokupholisa umoya webhasi, umqeqeshi, ibhasi yesikolo kunye nomzi mveliso webhasi kunye nabenzi | SONGZ
Uthotho lwe-SZQ, uQoqosho, i-A / C ye-9 ukuya kwi-12.9 yeebhasi, ukuhamba ngokuhamba kwealuminium fin condenser
Ngokubhekisa kwisibulali-moya seminibhasi okanye ibhasi engaphantsi kwe-8.5m, nceda ujonge kuthotho lwe-SZG. Okanye unganxibelelana nathi ku sales@shsongz.cn ngeenkcukacha ezithe kratya.
Ukucaciswa kobuchwephesha beeBhasi A / C SZQ Series:
20 kW okanye 68240 Btu / h
24 kW okanye 81888 Btu / h
26 kW okanye 88712 Btu / h
28 kW okanye 95536 Btu / h
22 kW okanye 75064 Btu / h
30 kW okanye 102360 Btu / h
Kucetyiswa ubude bebhasi （iyasebenza kwimozulu yase China）
I-400 cc / r
Ngama-558 cc / r
33 kW okanye 112596 Btu / h
35 kW okanye 119420 Btu / h
37 kW okanye 126244 Btu / h
36 kW okanye 122832 Btu / h
38 kW okanye 129656 Btu / h
40 kW okanye 136480 Btu / h
I-12.0 ~ 12.9 m
I-750 cc / r
I-10500 m3 / h (5)
Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZQ-Ⅲ-D Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZQ-ⅢF-D Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZQ-Ⅳ-D
Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZQ-ⅣF-D Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZQ-Ⅵ-D Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZQ-ⅥF-D
Ulwazi loBugcisa be-SZQ-VD Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZQ-VF-D
1. Yonke le nkqubo ibandakanya iyunithi yophahla, i-grille yokubuyisa umoya, icompressor, kunye nezinto zokufaka, ezingabandakanyi isibiyeli se-compressor, amabhanti, ifriji.
2. Ifriji yi-R134a.
3. Umsebenzi wokufudumeza awunakukhetha.
4. I-Compressor BOCK, VALEO okanye i-AOKE ayinakukhethwa.
5. I-fan kunye ne-blower njengenketho njenge-brush okanye i-brushless.
6. Nceda unxibelelane nathi ku sales@shsongz.cn ngezinye iinketho kunye neenkcukacha.
Ukungeniswa kweNgcaciso yezoBuchwephesha ye-SZQ Series ye-Bus Conditioner
1. Inkangeleko entle
SZQ air conditioner series yamkela uyilo obhityileyo, Ebubanzini air conditioner yi-188mm, nto leyo ingaphantsi kune ukutyeba le conditioner yangoku yesiqhelo, leyo ihlangabezana neemfuno zebhasi kulawulo ukuphakama conditioner umoya. Ukongeza, imbonakalo ye-air conditioner yenzelwe ukulungiswa, ehambelana ne-aesthetics yanamhlanje kwaye inembonakalo entle nefashoni.
2. Uyilo olulula
I-condenser isebenzisa isiseko sokuhamba ngokuhambelanayo. Isiseko se-condenser siyilelwe njengesakhelo esimilise i-V ngaphandle kwesakhiwo seqokobhe elingezantsi. Indibano yomoya ophuma kwindibano evaporator yamkela iqokobhe elitsha elisezantsi elidibeneyo lokugoba. Ngezi ndlela zilapha ngasentla, ubunzima bomoya opholileyo buyancipha kakhulu.
Umzila oHlukeneyo wokugoba umoya
Isiseko sokuhamba ngokuhambelana kunye nesakhelo se-V ngaphandle kwesakhiwo seqokobhe elisezantsi
3. Ukuhanjiswa kobushushu ngokufanelekileyo
Kuyilo lwendlela yokuhamba kwe-condenser ye-flow condenser, indawo enobushushu obuphezulu befriji yangaphakathi iyahambelana nendawo yesantya somoya ovuthuzayo wangaphambili. Ukuchasana nobushushu umahluko wobushushu obuphezulu kunye noyilo olufanelekileyo lobude benkqubo zisetyenziselwa ukunciphisa ukunganyangeki kokuhamba. ngokwenjenje ukwandisa ubushushu be condenser kunye namandla otshintshiselwano ukuze kwandiswa ukusebenza ngokulinganayo kokufudumeza kobushushu.
4. Ukukhuselwa kwendalo
Xa kuthelekiswa ne-condensers yemveli ye-tube-fin, uthotho lwe-SZQ lusebenzisa ii-cores zokuhamba zokuhamba ngokuhambelana kunye nokwenza ngcono inkqubo yokubetha umoya. Oku kunceda ukunciphisa intlawulo yefriji ngama-40%. Ngokwenjenje ukunciphisa ifuthe lokuvuza kwefriji kwindalo esingqongileyo.
Isakhelo esimile ngoku-V
I-SZQ Series Bus AC Imisebenzi yokuPhucula, ngokuzithandela,
1. I-Defroster kunye ne-Air conditioning kwikhabhathi yoMqhubi
I-defroster, kunye ne-AC kwikhabhathi yomqhubi inokufakwa ngokwemfuno yomthengi, ukubonelela ngendawo efanelekileyo kumqhubi.
2. Itekhnoloji ehlanganisiweyo yolawulo lwangaphakathi
Umdibaniso wepaneli yolawulo kunye nezixhobo zesithuthi zilungele ubeko olumbindi lolawulo lwezithuthi. Umsebenzi olawula kude wolawulo lwemveliso wongezwa ukulungiselela ukulawulwa kokusebenza kwabathengi.
3. Itekhnoloji yokuHamba ngemibhobho kunye nobushushu
Umbhobho wokufudumeza amanzi unokukhokelwa ngaphandle kumbindi we-evaporator ukuze uqonde ukufudumeza kwesixhobo sokupholisa umoya kwaye uhlangabezane neemfuno zobushushu bebhasi kwindawo ebandayo.
4. Itekhnoloji yokucoca umoya
Ibandakanya ikakhulu imisebenzi emine: ukuqokelelwa kothuli lombane, ukukhanya kwelanga, umbane weon ion, kunye nefotocatalyst filtration, enokufikelela ngokusisigxina, ukungaphazanyiswa kokulwa intsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane, ukususa ivumba kunye nokususa uthuli olusebenzayo, kuthintele indlela yokudlulisela intsholongwane.
5. Itekhnoloji yokulawula isifo kude
Umsebenzi "wolawulo lwamafu", ukuqonda ulawulo olukude kunye noxilongo, kunye nokuphucula inkonzo kunye nokubeka esweni amandla kusetyenziswa idatha enkulu.
6. Itekhnoloji yoLawulo loMbane
Ngokwamaqondo obushushu ebhasini kunye nokusingqongileyo, ukuhamba kwe fan kunye necompressor kuhlengahlengiswa ngokwamanqanaba amaninzi ukunciphisa ukuqala kunye nokumisa isiguquli, ukuphucula intuthuzelo yabo bonke abakhweli, kunye nokuqinisekisa ukuba inkqubo isebenza ngokufanelekileyo .
Ukusetyenziswa kwe-SZR Series Bus AC:
Ngophuhliso lwentengiso kunye nokuphuculwa kwemigangatho yokuphila, ibhasi inyuke ngokuthe ngcembe ukusuka kwinto elula yesiqhelo yokuhamba ukuya ekuqwalaseleni ngakumbi ekuphuculeni imeko yentuthuzelo kunye nezothutho. Ke ngoko, abakhweli abaphezulu bayenyuka unyaka nonyaka kule minyaka idlulileyo. I-SZR igxile kwinkangeleko kwaye ilungele iibhasi eziphezulu kunye naphakathi. Imbonakalo yentengiso ilungile.
1. Uluhlu olubanzi lwesicelo
I-arc engezantsi yoluhlu lwe-SZR ilungele ii-arcs zophahla kunye nomgama we-6 ~ 72 yeemitha, ububanzi beyunithi yi-1860mm, kwaye indawo yokuphuma komoya ityiswa ngokuthe ngqo kwimingxunya yomoya kumacala omabini ebhasi, ekulula ukuyifaka . Uthotho lwemveliso ineemodeli ezi-8 ukusuka kwezincinci ukuya kwezinkulu, kwaye amandla okupholisa yi-20 ~ 40KW, efanelekileyo i-8 ~ 13 yeebhasi zeemitha.
5. Itekhnoloji yoLawulo loMbane
Lungelelanisa kuluhlu olubanzi lokugoba kophahla
2. Rich iinketho uqwalaselo
Uchungechunge lwe-SZR lucebile kuqwalaselo lwamaqela abasebenzisi ahlukeneyo, kwaye kukho ulungelelwaniso oluninzi lwabasebenzisi abanokukhetha.
Isiphelo soqwalaselo oluphezulu: ikakhulu kulungelelwaniso lokungenisa kwezithuthi zikawonkewonke kunye neebhasi zabakhenkethi eziphezulu, iifeni kunye nezinye izixhobo
Uqwalaselo lwezoqoqosho: Ijolise ikakhulu kuqwalaselo lweebhasi zoqoqosho, iibhasi zabakhenkethi, abalandeli kunye nezinye izinto.
3. Amatyala okuSebenza oMdibaniso weSixhobo soMoya kwiBhasi:
I-Ankai (JAC) i-600 ibhasi efakwe nge-SONGZ ye-air conditioner eRiyadh (eSaudi Arabia)
I-Ankai (JAC) i-3,000 ibhasi efakwe nge-SONGZ ye-air conditioner eRiyadh (eSaudi Arabia)
Iifoto eziyi-1 000 zebhasi ezifakwe kwisikhombisi somoya se-SONGZ eNaypyidaw (eMyanmar)
Egqithileyo Isivavanyi soMoya ngebhasi, umqeqeshi, ibhasi yesikolo kunye neBhasi ecacisiweyo
Okulandelayo: Isilawuli soMoya seBhasi kwiBhasi eyiDecker